Kenya: Sary mampihetsi-po momba ny fitroarana sy ny fanantenana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2018 3:16 GMT
Afaka milaza tantara ny teny, afaka manome soritra antsika ny sary, ary manana fomba hampitambarana azy roa ireo ny lahatsary, ka mahatonga ny fanamorana ny fifandraisana ara-pihetseham-po momba ny zava-mitranga. Nandritra ny hetsika mahery setra nateraky ny voka-pifidianana mahagaga tao Kenya, nakatona ny haino aman-jery ary maro no voatery niankina tamin'ny aterineto ho an'ny filàn'izy ireo vaovao, ny hafa kosa nisahana izany tamin'ny famoronana ny median'izy ireo manokana, nitondra fijoroana vavolombelona tamin'ireo zava-nitranga miaraka amin'ny kamerà eny an-tanana.
Tao amin'ny Facebook, nandefa lahatsary fohy 8 ilay mpisera Duncan Musicha, lahatsary toa nalaina tamin'ny kamera finday an'ny vondrona “Peace on Kenya”. Ahitana olona mitsoaka ny polisy ny ao anatin'ny lahatsary, ary hahenoina poabasy ary faty mitsiatra amin'ny tany.
Ity horonantsary manaraka ity, Refugees in our own country avy amin'ny NTVKenya dia mampiseho ireo mpitsoa-ponenana tonga tao amin'ny tobin'ny polisy Eldoret, sy ny valan-javaboahary Jamuhuri ao Nairobi: vehivavy sy ankizy izay mandositra ny herisetra ara-poko nateraky ny valim-pifidianana ny ankamaroany, tsy mahafantatra hoe rahoviana izy ireo no afaka miverina any amin'ny tanànan'izy ireo norobaina sy indraindray nodorana.
Manana vaovao farany maharitra 12 minitra ny Aljazeera, izay momba ny toe-draharaha misy eo amin'ireo kandidà mpifaninana Mwai Kibaki avy amin'ny PNU sy Raila Odinga avy amin'ny ODM, sy ny fifanarahan'izy ireo hihaona mba hiresaka ny toe-draharaha, ary hita ao ihany koa ny vaovao ankapobeny momba ny tantara ara-politikan'i Kenya .
Manome fomba ho an'ny olona mba hitatitra ny herisetra sy ny tranga hafa ihany koa ny lahatsary. Ao amin'ny Ushahidi.com, tatitra iray momba ny trano nirehitra tao Kapsoya akaikin'i Eldoret no nampiarahana tamin'ny antsafa an-dahatsary, nampidirin'ny afromusing tao amin'ny youtube, izay feno sy mampihetsi-po tanteraka ny fitantarana ireo zava-nitranga mialoha sy taorian'ny fifidianana.
Daudi avy ao amin'ny MentalAcrobatics mizara lahatsary fohy ahitana an'i Charity Ngilu manontany manamboninahitra iray misahana ny fandravana fihetsiketsehana ara-politika ao Hurlingham amin'ny antony tsy amelan'izy ireo hanao famoriam-bahoaka. Hoy izy tamin'izany:
Mampiseho an'i Charity Ngilu manontany manampahefana iray mikasika ny antony tsy ahafahana manohy ny famoriam-bahoaka ity horonantsary ity. Somary mikatsokatso izany ary mifarana amin'ny fehezan-teny tapany, saingy farafaharatsiny, mampiseho karazana fifanakalozan-kevitra izany.
Voices of Africa [en] mampiseho ny asan'ireo olon-tsotra mpanoratra isan'andro maromaro nampiasa kamera finday handraketana sary sy antsafa an-dahatsary, manome fomba fijery hafa malalaka momba ireo hetsika vao haingana. Ao amin'ny tranokalan'izy ireo, dia afaka mahita mpitarika ny ODM mangataka hetsika milamina ianao, tsy misy fandrobàna na herisetra mandritra ny diabe, ekipa mpanelanelana eo am-pananganana sy ny fiverenana tsikelikely amin'ny laoniny, farafaharatsiny any Nairobi, izay niverina teny an-dalambe ny olona ary nisokatra ny fivarotana.
Eyes on Kenya naka lahatsary telo samihafa mba hampisehoana ny toe-java-misy eo amin'ny vehivavy ao anatin'ny ady: Voalohany, ny horonantsary izay hitanao eto, avy amin'i Dekha Ibrahim Abdi, nahazo ny loka Nobel fandriampahalemana 2007 sy ny tantarany mikasika ny fomba nitondrany foko samihafa mba hanaiky fandriampahalemana fa tsy miady loharano kely, avy eo, ny lahatsary fizarana roa an'ny al-Jazeera kosa mitatitra raharaha 255 farafahakeliny momba ny fanafihana vehivavy, mifandraika amin'ny fampielezan-kevi-pifidianana, ary tsy voampanga ireo meloka, izay mampiseho fa amin'ny sehatra momba ny zon'ny vehivavy, mbola lavitra ny lalana haleha.
Ho fampahalalana misimisy kokoa momba ny zava-misy any Kenya, aza misalasala mitsidika ny pejy fitantaran'ny Global Voices manokana izay manangona vaovao betsaka avy amin'ny faritra araka izay tratra, miaraka amin'ny rohy mankany amin'ireo bilaogy ao an-toerana izay mitatitra ny zava-mitranga.
Sary avy amin'ny MentalAcrobatics, nampiasaina araka ny Creative Commons License.